Tribhanga (2021) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 6.2/10 1746 votes
Kajol, Kanwaljeet Singh, Kunaal Roy Kapur, Manav Gohil, Mithila Palkar, Shweta Mehendale, Tanvi Azmi, Vaibhav Tatwawaadi
နာယနျဆိုတဲ့အမြိုးသမီးကွီးဟာ နာမညျကွီးစာရေးဆရာမတဈယောကျပါ…..ငယျစဉျကထဲကရေးခဲ့တဲ့ စာအုပျတှအေတျောမြားမြားဟာ အရောငျးရဆုံးစာရငျးဝငျခဲ့သလိုရုပျရှငျတှအေဖွဈအမွောကျအမြားပွနျလညျရိုကျကူးခဲ့ရပါတယျ….. ငယျစဉျက စာရေးခွငျးအလုပျကိုပဲဇောကျခလြုပျကိုငျခဲ့ပုံရတယျ….
သမီးဖွဈသူအပျေါနှေးထှေးမှုတှလေညျး လဈဟငျးခဲ့ပုံပါပဲ…သမီးဖွဈသူကလညျး အရှယျမတိုငျခငျရငျ့ကကျြခဲ့ရပွီးကိုယျ့လမျးကိုယျဖောကျပွီးအောငျမွငျနပေမေဲ့ အမဖွေဈသူစာရေးဆရာမကွီးကိုတော့အမုနျးကွီးမုနျးနဆေဲပါပဲ….. အသကျအရှယျရလာတဲ့စာရေးဆရာမကွီးဟာ နောကျဆုံးအနနေဲ့ကိုယျတိုငျရေးအတ်ထုပတ်တိလေးထုတျသှားခငျြတယျ…
ငယျဘဝကစလို့ဖွတျသနျးပုံအဆငျ့ဆငျ့ကိုရေးသားသှားခငျြတယျ..ခကျတာကသူမရဲ့လကျကနျြးမာရေးအခွအေနကေ ကိုယျတိုငျရေးဖို့ခကျခဲတာကွောငျ့ တခွားစာရေးဆရာတဈယောကျကိုကူညီတောငျးပွီးအသံသှငျးမှတျတမျးနဲ့ပွနျရေးစပေါတယျ…
အဲ့ဒီလိုရေးနစေဉျကာလမှာပဲမထငျမှတျတဲ့အရာတှဆေကျတိုကျဖွဈလာပါတော့တယျ…ဒီကားက မငျးသမီးကွီး Kajol အဓိက ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ….ဇာတျလမျးတျောတျောကောငျးတဲ့ ကားမို့အိန်ဒိယကားကွိုကျသူတို့ လကျမလှတျသငျ့ပါဘူး…
ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Khaing Zar Thwe ဖွဈပါတယျ
နာယန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟာ နာမည်ကြီးစာရေးဆရာမတစ်ယောက်ပါ…..ငယ်စဉ်ကထဲကရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေအတော်များများဟာ အရောင်းရဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့သလိုရုပ်ရှင်တွေအဖြစ်အမြောက်အများပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်….. ငယ်စဉ်က စာရေးခြင်းအလုပ်ကိုပဲဇောက်ချလုပ်ကိုင်ခဲ့ပုံရတယ်….
သမီးဖြစ်သူအပေါ်နွေးထွေးမှုတွေလည်း လစ်ဟင်းခဲ့ပုံပါပဲ…သမီးဖြစ်သူကလည်း အရွယ်မတိုင်ခင်ရင့်ကျက်ခဲ့ရပြီးကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်ပြီးအောင်မြင်နေပေမဲ့ အမေဖြစ်သူစာရေးဆရာမကြီးကိုတော့အမုန်းကြီးမုန်းနေဆဲပါပဲ….. အသက်အရွယ်ရလာတဲ့စာရေးဆရာမကြီးဟာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပတ္တိလေးထုတ်သွားချင်တယ်…
ငယ်ဘဝကစလို့ဖြတ်သန်းပုံအဆင့်ဆင့်ကိုရေးသားသွားချင်တယ်..ခက်တာကသူမရဲ့လက်ကျန်းမာရေးအခြေအနေက ကိုယ်တိုင်ရေးဖို့ခက်ခဲတာကြောင့် တခြားစာရေးဆရာတစ်ယောက်ကိုကူညီတောင်းပြီးအသံသွင်းမှတ်တမ်းနဲ့ပြန်ရေးစေပါတယ်…
အဲ့ဒီလိုရေးနေစဉ်ကာလမှာပဲမထင်မှတ်တဲ့အရာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်…ဒီကားက မင်းသမီးကြီး Kajol အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်….ဇာတ်လမ်းတော်တော်ကောင်းတဲ့ ကားမို့အိန္ဒိယကားကြိုက်သူတို့ လက်မလွှတ်သင့်ပါဘူး…
ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Khaing Zar Thwe ဖြစ်ပါတယ်
Kajol Kanwaljeet Singh Kunaal Roy Kapur Manav Gohil Mithila Palkar Shweta Mehendale Tanvi Azmi Vaibhav Tatwawaadi
Option 1 server.mfile.cloud 453 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 453 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 453 MB SD (480p)
Option5sharer.pw 1.1 GB HD (1080p)
Option6yuudrive.me 1.1 GB HD (1080p)
American Gigolo (1980) 1980
The Third Murder (2017) 2017